Global Voices teny Malagasy · 4 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 04 Janoary 2019
Serbia: Belgrade ho an'ny Monopoly
Iray amin'ireo kilalao lalaovina amin'ny boritra malaza indrindra eran-tany ny Monopoly, ary misy fifidianana ireo tanàna 24 izay ampidirina anatin'ny Fanontana Manerantany an'ity kilalao ity mandeha amin'izao. Nikarakara hetsipanentanana ireo bilaogera Serba mba hanampiana ny renivohiny, Belgrade, hahazo toerana iray anatin'ny lisitry ny Monopoly.
Amerika Latina04 Janoary 2019
Natsahatra ny fikarohana nataon'ny tafika an'habakabaka Breziliàna rehefa tsy nahitàna vokany nandritra ny tapabolana. Tsy misy mpiresaka manerana ny firenena ilay raharaha.
Azia Atsinanana04 Janoary 2019
Júlia Lopes de Almeida, mpanoratra namiratra tamin'ny tanonjato faha-19, saingy tsy hita any amin'ny Akademia Breziliàna Momba ny Haisoratra
Araka ny lazain'i Michele Fanini, nahita ampahany tamin'ny asa sorany, Júlia Lopes de Almeida no voalohany sady tena fanevan'ny fahabangana anaty andrim-panjakana vokatry ny sakana apetraky ny maha-lahy na vavy tao Brezila